Madaxweynihii xilka ka degay Shariif iyo qoysaskiisa oo nolol cusub ay uga bilaabatay dalka Ugnadha - iftineducation.com
Sh. shariif iyo musafini
iftineducation.com – Madaxweynihii hore ee Somalia Shiikh Shariif Shiikh Axmed iyo xaasaskiisa oo shalay galab boorsooyinkooda ka xirxirtay magaalada Muqdisho ayaa gaaray xalay magaalada Kambala ee dalka Ugandha halkaasoo nolol cusub ay uga bilaabatay.
Shiikh Shariif iyo xaasaskiisa oo tan iyo intii uu xilka wareejiyey ku noolaa guri ku yaala agagaarka madaxtooyada oo ciidamada AMISOM ay ku ilaalin jireen ayaa nolosha uga bilaabatay dalka Ugandha waxay timid markii madaxweynaha dalkaas Yuweri Musaveni uu ugu yaboohay degenaansho isaga iyo qoysaskiisa ay ugu noolaadaan gudaha dalkaasi.
Madaxweynihii hore ayaa waxaa horey u sii raacay afar xaas oo labo ka mid ah aan fagaarayaasha lagu arkin iyo 12 caruur ah oo ay dhaleen qaar ka mid ah xaasaskaasi, waxaana garoonka dayuuradaha Muqdisho ka qaaday labo dayuuradood oo xalay ka dejiyey magaalada Kambala.
Dowlada Ugandha ayaa Shariif iyo qoyskiisa u diyaarisay guri weyn oo ku yaala agagaarka qasriga madaxtooyada magaalada Kambala halkaasi oo ay ku noolaan doonaan illaa xili aan la ogeyn.
Sheekh Shariif ayaa noqday madaxwaynaha KMG Soomaaliya horaantii 2009-kii iyo labo bil ka hor xilka ku wareejiyey madaxweynaha talada haya ee Somalia Xasan Shiikh Maxamuud oo doorasho kaga guuleystay markii wareegii ugu dambeeyey ay iskugu soo hareen.